कृषि क्रान्ति बिना आर्थिक क्रान्ति स भव छैन : मदनकृष्ण श्रेष्ठ – newsagro.com
कृषि क्रान्ति बिना आर्थिक क्रान्ति स भव छैन : मदनकृष्ण श्रेष्ठ
December 12, 2013 NewsAgro0Comments
यो समाचार 293 पटक पढिएको
नेपालको कृषिक्षेत्रको अबस्था कस्तो हेर्नुभएको छ
नेपालको कृषिक्षेत्रको अबस्था अत्यन्तै निराशलाग्दो छ। साठी बर्षअघिकै कृषि प्रणालीमा आधारित खेतिपाती हाल पनि हुँदै आएको छ। कृषिमा आधुनिकता आइसकेको छैन। कृषिप्रधान मुलुकमा सरकारले राम्रो लगानी लगाउन सकेको छैन। जसका कारण बर्षेनी करोडौं मूल्य बराबरको तरकारी, भेडा च्याङग्र, खसी बोका विदेशबाट आयात गर्न नेपाली जनता बाध्य छन।
‘महजोडीÓ कृषि क्षेत्रमा किन लाग्यो। यो क्षेत्रमा बढी मुनाफा छ भनेर ? यो अभियान जितपुरमै सिमित हुन्छ वा बृहत अभियानमा जान्छ ।
त्यसो होइन । हामी त ‘विदेशको शिप स्वदेशमै प्रयोग होस र नेपालील कामदार आफै मालिक बनुन भनेर यो अभियान सुरु गरेका छौं । मुनाफा कमाउने उद्देश्य हाम्रो हुँदै होइन। मह एग्रिक ल्चरमा काम गर्ने सबै कामदार नै मालिक छन। हाम्रो उद्देश्य कृषिमा आधुनिकता ल्याउनु हो र धपधपी घाममा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई यतै काम गर्ने अबसर प्राप्त गरुन भनेर लागेको । इजराइलमा नेपाली दाजुभाईको अबस्था हेरेर दु:ख लागेर र एउटै बोटमा १ सय २४ किलोस म टमाटर फलाएको दे दा नेपालमा पनि केही गरौ लाग्यो र यो अभियान सुरु ग:यौ। यसलाई हामी यही सिमित रा दैनौं। बिस्तारै मुलुकभर फिजाउने गृहकार्यमा जुटेका छौं। यसैमार्फत कृषि अनुसन्धान केन्द्र र प्रशिक्षण केन्द्र संचालन गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ।
तपाईको बिचारमा नेपाली कृषि किन उभो लाग्न सकेको छैन?
पहिलो कारण त कृषि क्षेत्र विविधता र आधुनिकतमा जान सकेको छैन। दोश्रो चाँही सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा रा न सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाली दाजुभाईको यो पेशाबाट रुची घट्दै गएको छ। तेश्रो कृषक दाजुभाईले राम्रो मुनाफा पाउन सकेका छैनन। मुनाफा जति बिचौलियाहरुले पाएका छन । यही कारणहरुले गर्दा कृषि क्षेत्र उभो लाग्न सकेको छैन।
← अन्तराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी कफीको माग बढ्दो
सुन्तलाका बगान सुक्न थालेपछि कृषक चिन्तित →